Ungashandura sei Mifananidzo kuVhidhiyo Nyore paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Dzimwe nguva, kungave kwekuratidzira kweprojekti, kana kutumira chimwe chinhu chakakosha kumunhu, zvirokwazvo une kuda kwekushandura mifananidzo kuita fomati vhidhiyo semufananidzo wesiraidhi. Muzviitiko izvi, zvirokwazvo waifanirwa kuisa mamwe mapurogiramu anorema, akadai sevapepeti vhidhiyo, ausingazive kwazvo mashandisiro kana kuti aunoshandisa kamwe chete uye uri kutora nzvimbo yakawandisa.
Zvakanaka, muGNU / Linux pane imwe yakapusa uye yakapusa imwe nzira, pamusoro pezvo, zvingangoita kuti iwe uchitova nayo, saka haufanire kutora imwe nzvimbo kushandura mifananidzo yako ive vhidhiyo nekukurumidza uye nenguva . Imwe nzira ndeye simba uye kuita zvakasiyana ffmpeg chishandiso.
Kugadzira nguva-inopera muvhidhiyo uye yekumira-kufamba kwemifananidzo, unogona kushandisa akateedzana emifananidzo aunayo pakombuta yako. Paunenge uchinge uine iyo mifananidzo mune dhairekitori (kubva kwaunofanira kuita rairo), semuenzaniso ~ / img, unogona kutanga kushanda neffmpeg kuti ugovaendesa kuvhidhiyo kubva pamutsetse wemirairo.
Zvakare, ini ndinokuraira iwe, kuti fambisa basa, kutumidza zvese mifananidzo zvakafanana, asi uine manhamba kuti uone odha yacho. Semuenzaniso, fungidzira iwe uine mufananidzo-1.jpg, mufananidzo-2.jpg, image.3.jpg, nezvimwe. Iwe unogona kureva kune vese nekadhi remusango. Semuenzaniso, ne mufananidzo-% d.jpg iwo ffmpeg raira raizobata mifananidzo yese kubva pamufananidzo-1.jpg kuenda kumufananidzo-9.jpg. Mumwe muenzaniso kana uine mazana emifananidzo, inogona kunge iri yekushandisa mufananidzo-% 03d.jpg sekadhi yemusango kuenda kubva 001 kusvika 999.
Zvakanaka regai tione iyo yekupedzisira ffmpeg yekuraira kushandura mifananidzo kuve vhidhiyo nyore. Kuenderera mberi nemazita andaisa semuenzaniso, zvingave sezvizvi:
Zvino, mushure mekupedza maitiro, iwe uchave mune dhairekitori vhidhiyo inonzi vhidhiyo-zita.mp4 pamwe nekutevedzana kwemifananidzo. Rangarira kuchinja paramende nemazita zvinoenderana nenyaya yako...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekushandura Mifananidzo kuVhidhiyo Nyore muLinux
Zvinoshamisa zvisingaite, kunyange hazvo izvozvi zvandiri kufunga nezvazvo, chaizvo nekuti kune dzimwe nzira dzakawanda dzekuita nadzo zvinhu seizvi muLinux inosarudzwa kushandisa iyo terminal, ndeyekuti vazhinji vashandisi veWindows havapedzisi vatama.
Softmaker FreeOffice 2021 iripo. Mahara hofisi suite yeLinux, Windows uye Mac